"Suitable Price for Superior Quality"
Steel Master Co.,Ltd is an importer and distributer of stainless steel pipes, solid materials,
Piping materials, ornamental decorative patterns, furniture and household utilities, machineries and equipments for stainless steel fabrication works and various kind of stainless steel materials according to customers requirement.
We especially import from Malaysia, Thailand, Vietnam and People Republic of China.
We also have stainless steel fabrication factory in Industrial Zone No.3 of South Dagon Township, Yangon Division. Our factory fabricates various types of stainless steel utilities and equipments; such as stainless steel water tanks, furniture, tailing, verandah, gate doors, carts, accessories for cold storage, food stuff, hospital, hotels and kitchen equipments. We also make installation of stainless steel piping system for factories and interior decoration of housing project.
စတီးမာစတာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက်သည် အရည်သွေးကောင်းမွန်သော စတိန်းလက်စ် စတီးပြား၊ ပိုက်၊ ဟင်ဂလန်၊ရှပ်လုံး၊ ဘိုး၊နပ် ၊ စကူ ၊ အလှဆင်ပစ္စည်းအမျိူးမျိူးနှင့် စတီးလုပ်ငန်းသုံး အာဂွန်ဝရိန်စက်၊ ပိုက်ကွေးစက်၊ဖြတ်စက်၊ခေါက်စက် အစရှိသည်တို့အပြင် သုံးစွဲသူ စိတ်တိုင်းကျ မှာယူလိုက်သော စတီးနှင့် ပါတ်သတ်သည့် ကုန်ပစ္စည်းအမျိူးမျိူးကို ကိုယ်တိုင် တင်သွင်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝှမ်း ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချနေသော ပင်ရင်းဖြန့်ချိရေး ကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
စတီးမာစတာ ကုမ္ပဏီသည် စတီးကုန်ကြမ်းအမျိူးမျိူးတို့နှင့် စတီးလုပ်ငန်းသုံး စက်ပစ္စည်းအမျိူးမျိူးတို့ကို အဓိက အားဖြင့် ထိုင်း ၊ မလေးရှား၊ ဗီယက်နမ်နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတို့မှ တိုက်ရိုက်မှာယူတင်သွင်း ဖြန့်ချိလျက်ရှိပါသည်။
ထို့အပြင် စတီးရေတိုင်ကီ၊ ပရိဘောဂ ၊ လက်ရန်း၊ ၀ရန်တာ ၊ဂိတ်တံခါး၊ အစရှိသည့် အိမ်သုံး စတီးပစ္စည်းအမျိူးမျိူး ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချခြင်း၊ ဆေးရုံသုံး၊ စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းသုံး၊ အအေး ခန်းသုံး၊ ဟိုတယ်သုံး၊ မီးဖိုဆောင်သုံး စတီးပစ္စည်းအမျိူးမျိူးတို့ကိုလည်း နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ စက်သစ်ကြီးများဖြင့် သုံးစွဲသူ စိတ်တိုင်းကျ အရည်အသွေးပြည့်ဝစွာ တီထွင်ဖန်တီး ထုတ်လုပ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
စတီးမာစတာကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိကစတီးဈေးကွက်ဖြစ်သော တောင်ဒဂုံ စက်မှုဇုန်(3) တွင် တည်ရှိပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံး ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ စတီးဈေးကွက်ဦးဆောင် စတီးမာစတာ ကုမ္ပဏီသည် နိုင်ငံတော်၏ တည်ဆောက်ရေး၊ သာယာလှပရေး ၊ ကျန်းမာရေးတို့တွင် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် တစ်ခန်းတစ်ကဏ္ဍ ပါဝင် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။
Quicks Links About Us Products Follow Us :
Hollow Form Materials
Abrasive, Chemicals and Tools
© 2013 - Steel Master Co., Ltd. Powered By : WWM